मेरो विश्वाश: परदेशी माया
दूर्जेय चेतना said on August 19, 2009 at 2:22 AM
के गर्नु यस्तै रहेछ जीबन। सबै छ तर कोही छैन जस्तो हुने रहेछ। बाच्नुको खेलमा को कहाँ कसरी हिड्नु पर्ने रहेछ। सायद तपाईलाईनै सम्झेर रोएका पो छनकि उनी। तपाईलाईनै माया गर्न नपाएर तड्पिएका पो छनकि। तपाईले जस्तो कतै आफ्ना कुराहरु राख्न नपाएर बिहोसिमा पो छनकि। चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने पो भएका छनकि उनी। तपाईको मायाको रमझम भन्दा बिदेशी रमझन सायदै आँगाल्लान उनी।।
साह्रै मन छोयो तपाईको कबिताले। धेरै धेरै धन्यवाद हे।।
सूर्य/सिकारु said on August 19, 2009 at 4:26 AM
कविता अति राम्रो लाग्यो आशा जी । तपाइको साहित्यिक यात्राले बाटो फराकिलो बनाउदै गएकोमा म अति नै खुसी छु कामना गर्छु शिखर चुम्न सफल होस छिट्टै ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said on August 19, 2009 at 4:09 PM
"औंला भाँची भाँची दिनहरु बिताउथेँ,
सार्‍है पिडादायी हुँदा रहेछन् बिछोडका यी पलहरु.."
यथार्थ भाव - आशा जी !
यो पनि राम्रो लाग्यो |
B.J. Dummali said on August 20, 2009 at 9:54 PM
आशा जी मान्छेले सोंचे जस्तो कहाँ हुन्छ, देखे जस्तो कहाँ हुन्छ, सपना एउटा अनि बास्तबिक्ता भिन्नै हामी के सोंच्छौ र यात्रा कता लाग्छ। हामी केवल समयको दाषी जिबनभर दासताभित्र रहेर एकपलको जिबन गुमाउनु पर्छ। तपाईंको कबिताले यथार्थ पोखेको छ। धन्यबाद यति भावमय कबिताको लागी।